Ma ogtahay saadaashii ugu dambaysay ee waaxda sirdoonka dhaqaaleyahan ee darajooyinka dhaqaalayaasha waawayn ee aduunka inay si weyn isku badashay iyadoo ay saamayn ku yeelanayaan arrimo badan sida Cudurka faafa ee COVID-19. Fadlan hubi wararka CFM maanta. | Jesson
Ma ogtahay saadaashii ugu dambaysay ee waaxda sirdoonka dhaqaaleyahan ee darajooyinka dhaqaalayaasha waawayn ee aduunka inay si weyn isku badashay iyadoo ay saamayn ku yeelanayaan arrimo badan sida Cudurka faafa ee COVID-19. Fadlan hubi wararka CFM maanta.
1. Shiinuhu wuxuu caawimaad dhanka talaalka ah siiyay 53 wadan oo soo koraya waxuuna dhoofiyay oo u dhoofinayaa talaalada 22 wadan. Ka dib markii ugu horreysay ee tallaalka COVID-19 la geeyo Pakistan, tallaalka COVID-19 ee ay China ka caawiso Cambodia iyo Laos ayaa yimid labada dal. Shiinaha ayaa sidoo kale gaarsiin doona talaallo badan dalal kale midba midka kale.
2. Wasaaradda Caafimaadka iyo Shaqada ee Japan: Sannadkii 2020, tirada dhalmada ee Japan ayaa hoos u dhacday 2.9% isla muddadan oo kale sanadkii la soo dhaafay ilaa 872700, waana rikoor hooseeya shan sano oo isku xigta; tirada dhimashadu waxay ahayd 1.3845 milyan, hoos ayey uga dhacday 0.7% sanad ka hor markii ugu horreysay muddo 11 sano ah.
3. Fasaxa Gu'ga Kadib, sicirka cuntada maxaliga ah ee Kuuriyada Koonfureed wuxuu keenay wareeg cusub oo kor u kaca wareega oo dhan ah. Qiimaha khudaarta ayaa si weyn kor ugu kacay, kuwaas oo qiimaha basasha cagaaran ay labanlaabantay isla xilligan oo kale sanadkii hore, qiimaha yaanyada iyo basasha ayaa kordhay in ka badan 80%, sidoo kale qiimaha bariiska ayaa sidoo kale sare u kacay ku dhowaad 20% marka loo barbardhigo isla muddadaas sanadkii hore. Dowladda Kuuriyada Koofureed ayaa sheegtay inay sii deyn doonto 60,000 tan oo dheeraad ah oo bariis ah suuqyada mustaqbalka dhow, ayna si firfircoon u taageeri doonto beeraleyda qudaarta ee gudaha si loo kordhiyo wax soo saarka khudradda; isla mar ahaantaana, iyadoo kuxiran kor u kaca qiimaha hadhuudhka, hoos u dhig canshuuraha soo dejinta ee dalagyada qaarkood; iyada oo loo marayo qorshooyinka jawaabta jilicsan si loo kordhiyo xasilloonida qiimaha.
4. Unugga Sirdoonka Dhaqaalaha wuxuu soo saaray saadaashiisii ​​ugu dambeysay ee lagu qiimeyn doono dhaqaalaha ugu waaweyn adduunka. Marka la barbardhigo 2019, qiimeynta afarta dhaqaale ee adduunka ugu sarreysa weli isma beddelin 2021, waxaa ku soo xiga Mareykanka, Shiinaha, Japan iyo Jarmalka; shanaad iyo lixaad, Hindiya iyo Boqortooyada Ingiriiska ayaa rogay qiimeynta; marka lagu daro, Brazil ayaa ka dhacday 10ka sare ee South Korea ayaa markale ku jirta 10ka iyo 9aad.
5. Magaalada New York waxay go'aamisay waqtiga saxda ah ee shineemooyinka ay dib u bilaabi doonaan markii ugu horeysay tan iyo markii uu dillaacay cudurka sambabaha ee ku dhaca wadnaha. Dhamaan shineemooyinka ayaa dib loo furi doonaa 5-ta bisha Maarso ugu horayn. Si looga hortago aafada, dhammaan shineemooyinka magaalada New York, sida meelaha kale ee shineemo ee horay uga furan Gobolka New York, waxay u oggolaan doonaan oo keliya xaadiritaanka 25%, in ka badan 50 qofna looma oggolaan doono hool kasta oo weyn oo lagu baaro shineemooyinka.
6.Cudurka ifilada shimbiraha ee ka dilaacay Yurub wuxuu keenay sare u kaca qiimaha ukunta dalal badan oo Yurub ah. Poland oo ah midawga Yurub ugu soosaarka badan digaaga isla markaana ah dalka lixaad ee ukunta soosaara, waxay soo aruurisay ilaa 5 milyan oo digaag ah, oo ay kujiraan tiro badan oo digaag ah. Qiimaha ukunta jumlada ee Poland waxay sare u kacday 18% ilaa 20% dhamaadkii Janaayo. Intaa waxaa dheer, qiimaha ukunta ee Faransiiska, Jarmalka iyo waddamada kale ee xubnaha ka ah Midowga Yurub ayaa sidoo kale kor u kacay heerar kala duwan.
7. [Guddiga Xeerarka Amni ee Mareykanka] laga bilaabo Febraayo 25, 2021, khidmadda Guddiga Xeerarka Ammaan ee Mareykanka (oo lagu dalaco iibinta amarrada oo keliya) ayaa laga dhimi doonaa 0.00221% illaa 0,00051%.
8. Saadaashii ugu dambaysay ee waaxda sirdoonka dhaqaaleyahan ee darajooyinka dhaqaalaha adduunka ugu waawayn ayaa si weyn isu bedeshay iyada oo ay saamayn ku yeelanayaan arrimo badan sida Cudurka faafa ee COVID-19. Marka la barbardhigo 2019, qiimeynta afarta dhaqaale ee adduunka ugu sareysa wali isma bedelin 2021, waxaa ku soo xigta Mareykanka, Shiinaha, Japan iyo Jarmalka, halka Hindiya ay ka dhacday shanta ugu sarreysa waxaana kala wareegay Ingiriiska. Marka loo eego isbeddellada hadda socda, dhaqaalaha Hindiya wuxuu mar kale ka sarreyn doonaa kan Ingiriiska, ugu yaraan illaa 2026. Hindiya waa waddanka ugu weyn ee ugu daran ee uu ku dhuftay cudurkan, illaa 200 milyan oo qofna ay u badan tahay inay dib ugu noqdaan saboolnimada.
Machadka Jabbaan ee Dhaqaalaha Guriyenta: sanadka 2020, celceliska qiimaha iibinta ee guryaha cusub ee laga dhisay Japan ayaa kor u kacay 3.8% sanadkii ilaa 49.71 million yen, isagoo gaaray abid abid ugu sareya afar sano oo isku xigta. Waxaa saameeyay cudurka, shirkadaha guryaha ee Japan ayaa joojiyay iibinta intii lagu jiray xaalad deg deg ah, sidaa darteed tirada iibka guryaha ee cusub ee Japan ayaa hoos u dhacay 15.2% sanadkii ilaa 59900 oo unug sanadkii 2020, tan ugu hooseysa tan iyo 1976. In kasta oo iibku hoos u dhacay, sanado kor u kaca qiimaha dhulka iyo kor u kaca qiimaha shaqaalaha ayaa taageeray sicirka guryaha sare.